Fotoana fihenan'ny Bitcoin, fotoana fampiasam-bola? | Vaovao momba ny gadget
Fotoana fihenan'ny Bitcoin, fotoana fampiasam-bola?
Taorian'ny fisondrotana sy fiakarana rehetra izay niara-niaina tamin'ny fiainan'ny crypto nandritra ny tantarany, ireo mpampiasa vola mahazatra anao dia nanjary mihoatra ny nahazatra an'ireo toe-javatra somary mikorontana ireo izay nanovan'ny fanombanana ny vola elektronika mandritra ny alina.
Saingy tsy latsa-danja ihany koa ny hoe, ho an'ny maro hafa, ity fironana ity dia mitohy ho karazana antony tsy hanombohana varotra Bitcoin amin'ny broker an-tserasera na amin'ny fomba hafa.
Ary rehefa mitranga izany latsaka amin'ity karazana ity amin'ny fanombanana ny BTC ary ireo vola crypto hafa, maro no tsy mijanona mahita an'io ho antony iray hafa tsy tokony hampiasa vola aminy. Saingy mila famerenana kely fotsiny ity fitotonganana vao haingana ity - ary koa ireo sasany teo aloha - mba hametrahana ireo karazana hetsika ireo ao anaty toe-javatra. Mba hahitana ihany koa, angamba, tsy afaka ny ho zavatra iraisana sy ny antony tsy tokony hihemoran'ny olona izy ireo, fa koa fotoana mety hampiasana vola.
Manaraka izany, hodinihintsika ity tranga ity ao an-tsaina, eny, fa tsy misy fotoana tsara hampiasana vola amin'ny crypto, fa fomba iray ihany hanatanterahana izany: amin'ny fahamalinana, fandalinana betsaka ary ny fiheverana hatrany ireo loza mety hitranga.
1 Ny fianjerany farany teo
2 Ohatra taloha
3 Ny fomba fijery
Ny fianjerany farany teo
Hatramin'ny nanombohan'ny Ny fanarenana ny vidin'ny BTC tamin'ny Mey 2019 Tsy hita ambany ny sandany raha naseho ilay farantsak'i Satoshi Nakamoto tamin'ny herinandro lasa. Araka ny notaterin'ny tranokalam-baovao Bloomberg, ny haavon'ny $ 6.500 isaky ny singa nasehon'i Bitcoin tamin'ny 16 Desambra dia ny laharam-panohanana vaovao ary na ny manam-pahaizana sasany aza dia nilaza fa mety hidina hatramin'ny 4.000 $ ny vidiny.
Araka ny filazan'ny manam-pahaizana voatanisa amin'ny alàlan'ny kinova an-tserasera an'ity haino aman-jery ity, ny fatiantoka amin'ny fanombanana ny cryptocurrency lehibe dia mety ho ny fanafihana ataon'ny manampahefana sinoa amin'ny karazana hosoka rehetra mifandraika amin'ny vola crypto, amin'ny fisian'ny halatra sy ny hacks amin'ny vola crypto mandrakariva ary ny tsy fahatokisan-tena fa ireo antony ireo dia mandrangitra ny mpampiasa vola lehibe. Na izany aza, na eo aza izany rehetra izany, azo atao ihany koa ny mieritreritra fa tsy ity no hianjera farany. Satria angamba hisy fanarenana. Araka ny efa niseho imbetsaka.
Ny vidin'ny vidin'ny Bitcoin hatramin'ny Desambra 2019
Ny fanombanana ara-tantara an'i Bitcoin —Ary avy any an-tànany ny sisa amin'ny vola crypto - dia tandavan-tendrombohitra sy lohasaha tandavan-tendrombohitra izay mampiseho mahazatra io karazana fananana io. Ny voalohany amin'ireo lesoka ireo dia hita amin'ny andro voalohan'ny Bitcoin, raha mbola tsy midika izany firy io anarana io tamin'ny fahavaratry ny 2011. Tamin'izany fotoana izany dia nanjary sarobidy mihoatra ny $ 20 isaky ny singa ny BTC taorian'ny vidiny ambany noho ny dolara volana vitsivitsy lasa izay. Na izany aza, talohan'ny faran'ny taona dia nidina hatramin'ny roa dolara ny cryptocurrency.
Ary ny fahavaratra manaraka indray dia nanamarika ny fiandohan'ny tampon'isa. Amin'ireo enina dolara tamin'ny volana Jona 2012, Bitcoin dia nahatratra 1.000 tamin'ny volana novambra 2013 ... hatramin'ny nahalavoany tamin'ny tapaky ny 2015 ka hatramin'ny 200 dolara.
Saingy mbola ho avy ny tsara indrindra. Tany am-piandohan'ny taona 2017 dia $ 1.000 ny sandan'ny BTC. Tamin'ny faran'io taona io ihany dia efa ho 20.000 3.000 ny vidiny. Nanomboka ny fotoan'ny hadalana tao amin'ny BTC. Herintaona taty aoriana dia nianjera ambanin'ny 12.000. Herintaona taty aoriana dia nanakaiky ny 16 izy io. Tamin'ny 6.500 Desambra, teo amin'ny lohasaha indray aho. Ao amin'ny lohasahan'ny XNUMX XNUMX.
Ny fomba fijery
Raha dinihina izay efa hita dia tsy nisy lohasaha na tampon'ny tantaran'ny Bitcoin tsy azo ovaina. Ny midina ary miakatra tampoka ny vidiny ary tsy misy olona, ​​na saika tsy misy olona, ​​afaka maminavina an'izany. Ka azo lazaina ve fa fotoana ratsy hampiasana vola ity lohasaha vaovao ity? Eny, ny marina dia tsia. Fa maninona no mety hisy, satria tsy misy mahalala raha hitohy hianjera tsy misy farany.
Na angamba, iza no mahalala, isika izao dia eo amin'ny toerana ambany indrindra amin'ny lohasaha. Ary ny sisa tavela manomboka izao dia fampiroboroboana vaovao. Ho hitantsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » teknolojia » Cryptocurrencies » Fotoana fihenan'ny Bitcoin, fotoana fampiasam-bola?
Apple dia manoratra patanty ho an'ny Touch ID eo amin'ny efijery
Fampandehanana an-tsarimihetsika taolana: AfterShokz Aeropex [Famerenana]